Wakaalada Naqshadaynta,daraasaadka iyo Dabagalka oo Deegaanada Jardulaan iyo Dabala oo Ka Kala Tirsan Degmooyinka Fiiq iyo Xamaro Ka Helay Biyo Maax ah(Spring Water). - Cakaara News
Nogob(CakaaraNews) Talaado Nov,12.2013:- Xukumada ka arrimisa Dawlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa intii ay jirtay waxa ay u guntiga dhishaa iskaga dhigtey sidi loo Horumarin laha korna loogu qaadi lahaa Nolasha Dadka Xoolo-dhaqatada ah ee deegaanka ku nool, sidii looga samato-bixin lahaa dhibaatooyinka ay la soo dalaa-dhacayeen Ku dhawaad Qarniga.
Sidoo kale Xukumada DDSI ayaa wax ay Ahmiyada 1aad 2aad iyo 3aadba ay siisay Hawlaha Horumarinta Dhanka helida Biyaha Nadiifta ah,taaso deegaanka guudahaan laga fuliyey ka sakow Qodida ceelasha Gunta dheer ee Biyaha dhulka hoostiisa ku jira,waxaa xooga la saaray dhibaatoyyinka mashruuca biyo Uruurinta ama keydiinta (biyaha Roobka), qodida Rigaga Ridada Dhadheer iyo mashaariicda ka faa'iideysiga Doxooyiinka iyo Wabiyada deegaanku Hodanka ku yahay.
Hadaba, socdaalkii Ilays iyo Iftiin iyo Nolol iyo Rajo Rumays ee Madaxweynaha DDSI iyo waftigiisii ku soo mareen Gobolada Nogob,Shabeele,Afdheer, Liibaan iyo Shiniile ayaa uu Madaxweynuhu wuxu Awaamiir buxda ku bixiyey markii uu indhihiisa ku soo arkay Heerka Baahida Adeegyada aasaasiga u ah Nolosha Bulshada Tashi buuxdana uu la soo yeeshay Qaybaha Bulshada ee Bud-dhigaha u ah Baahida Shacabka ayaa waxa uu madaxweynuhu dhamaan Xafiisyada ay khuseyso dhibaatoyiinka uu Indhihiisa ku soo arkay in ay sida ugu dhakhsaha badan wax uga qabtaan.
Wakaalada Nashqadeeyta,Daraasadka iyo Dabagalka Deegaanka (WNDDS) Injineerada iyo Geologistiyada oo uu horkacayo Mareeyaha Wakaaladu Mudane Guuleed Aw Cali oo ka duulaya dhaqaan galintaa Awaamirtii Madaxweynaha aya waxay muddoyiinkaba Socdaal ku joogaan Gobolka Nogob iyagoo ku hawlanaa daraasadyada kala duwan iyo sameynta Naqshadaha Bundooyin iyo Biyo- Galin kala duwan oo laga fulinayo Degmooyin ka mida Gobolka Nogob.
Gobolka Nogob ayaa waxaa lagu xasuustaa hadaad Dib isugu majiirto 5sano ka hor uun horumar la'aan ba'an oo mudo dheer ka jirtey gaar ahaan xaga biyaha nadiifta halka wado la'aantuna ay halakaysay ama xayndaab aan u saamixi jirin Deegaan isu muuqda in ay si dhib yar isugu soo talaabaan, iyaado marar badan la isku dayey in si buxda wax looga qabto balse aan lagu wada guleysaan.
Inkastooy, kabiraada wakaalada Nashqadeeynta oo adeegsanaya xogihii kala duwana ee Bulshada deegaanku uu soo bandhigayeen Madaxweynaha si loo xaliyo dhibaatada biyo la'aaneed, ayaa wax ay ku guuleysteen in ay soo daah-furan goobo leh biyo Maax (spring water) oo laga helay Goobaha Jardulaan iyo Dabala. Labadaan gobood ayaa ku kala yalla degmoyiinka Fiiq iyo Xamaro islamarkana dhul bura-ley ah oo masaafo dheer loo lugeynayo, ayey WNDDS wax ay si buxda uu soo gabagabeyeen Mashruuca Biyo Galinta ee Fik, Xamaro iyo Gasangaas oo ah Mashruuc soconaya ama ukala goshayaa Masfo dhan 121km. Mashruucan oo ay ku bixi doonto dunyo dhan 150 Million oo bir in ka badan ayaa wax si buxda uga faa'iideysan doona bulshada xoolodhaqatada ee ku nool degmoyiinka Fik iyo Xamaro.
Sido kale waxaa looga faa'iideysan doona Abuurista (Beerida) Calafka Xoolah iyo wax soo sarka midhaha kala duwan ee beeraha. Ugu danbeeyn Mareeyaha Wakaalada Naqshadaynta iyo Daraasaadka Deegaanka Mudane Guuleed Aw Cali wax u si gaar ah ugu mahadnaqeey Mamuulka Gobolka Nogob iyo Ciidamada Garaarka (Liyu Booliska), oo markey si geesinimada leh ee ay salka ugu dhigeen Nabagaliyada deegaanka, islamarkana ay maanta si buxda uga qeybqadanayaan dhamaan hawlaha Horumarinta Asaasiga ah ee degaanka laga wado.
Gaarahaan Regimantiga 6aad iyo 21aad oo ku hawlaan Mashaarciida Jidaadka, Bundoonyinka iyo Biyo galinta ee laga wado Gobolka Nogob ayu Mareeyuhu waxaa uu ku Amaaney sida munasabka u tahay in la siiyo bilada " Gesiyada Horumarka".